Madaxweyne Türel wuxuu booqday ganacsatada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaMadaxweyne Ku Xadgudubka Madaxweynaha
26 / 09 / 2018 07 Antalya, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY, taraamka
Duqa magaalada Antalya Menderes Türel, 3. Wuxuu booqdey dukaamo ku yaal Sakarya Boulevard iyo Yeşilırmak Street oo ku yaala waddada mashruuca "Etap Rail System" wuxuuna uga mahad celiyay dulqaadkiisa.
Duqa magaalada Menderes Türel ayaa la kulmay Ururuka AKP Kepez si uu u soo booqdo ganacsiga. Caadi, 3. Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda ayaa soo dhaweeyay dadkii farsamoyaqaanada ahaa iyo muwaadiniintii ku yaala Yeşilırmak Street iyo Sakarya Boulevard, halkaas oo shaqadu ay ku socoto xawaare buuxa. Dadka Kepez waxay ku soo dhaweeyeen Türel, oo ay uga mahad celiyeen adeegyadooda. Madaxweynaha Turel, oo siiya warar muwaadiniinta ku saabsan shaqada, wuxuu noqon doonaa inta u dhexeysa Varsak iyo Zerdalilik 25 kilomitir 3. Waxa uu sheegay in Mashruuca Nidaamka Isgoyska marxaladda uu si aad u degdeg ah u socdo, habka tareenka ayaa bilaabmay.
Khamriga loo sameeyey hadiyad
Madaxweyne Menderes Turel, 3. Stage Rail in Project System ula jeer Kepez ka Varsak'ta muwaadiniinta Kepezli, Aksu, basaska ka Işıklar, jaamacadaha, isbitaalka cilmi baarista waxbarashada ay doonayaan in ay meel kasta oo ay gaaraan habka dadweynaha casriga ah ee gaadiidka oo tareenka nidaamka, ayuu yidhi boodin. Duqa Turel wuxuu sheegay in ay qaban karaan dhammaan adeegyada ku yaala Antalya si ay u taageeraan iyo dulqaadka dadka reer Antalka, waxayna uga mahadceliyeen ganacsatada Yeşilırmak Street iyo Sakarya Boulevard inay u dulqaataan hawshooda. Xirfadlaha caadiga ah wuxuu bixiyaa 40 sanadlaha ah ee qaxwaha.
Laga soo bilaabo madaxweynaha Turel ee isgoyska Aksu 5
Madaxwaynaha Nidaamka Isgaadhsiinta ee ka socda Madaxa Tifaftiraha ee Konuksever
Kusiildaroge "Türel Tareen"
Qorshaha Gaadiidka Gaadiidka ee guud waa in la diyaariyaa
3. 32 Milyan Lacagtii Lacagta Musuq-maasuqa ee Garoonka Garoowe